म चाहन्छ कि मार्केटरहरू यसो भन्न बन्द गर्नुहोस् ... | Martech Zone
बिहीबार, मे 7, 2015 शुक्रबार, फेब्रुअरी 2, 2018 Douglas Karr
जेन र म मुख्यालयको भ्रमण गयौं Geneysys यो हप्ता र उनीहरूको डिजिटल मार्केटिंग टोलीमा बस्न पाए र एक प्रश्न यो पप अप भयो कि यदि हामीले कुनै पञ्जीकरणमा पछाडि इन्फोग्राफिक राख्यौं भने। हामीले चाँडै जवाफ दियौं कि हामीले त्यो कहिले पनि गरेका थिएनौं। अन्तर्क्रियात्मक टोलीले भने कि तिनीहरू दुबै एसँग एक परीक्षण गरे whitepaper र इंफोग्राफ़क र ०% रेजिष्टर गरिएको र ह्वाइटपेपर डाउनलोड गरियो र १००% इन्फोग्राफिक हेर्नका लागि दर्ता गरियो।
म बिल्कुल माया गर्दछु जब हामी टोलीलाई भेट्छौं जुन यथास्थितिलाई काउन्टर गर्दछ र केहि यस्तो परीक्षण गर्दछ। यो यति महत्त्वपूर्ण छ कि हामी, बजारका रूपमा, हाम्रो प्राकृतिक पूर्वाग्रह वा सान्त्वनाको क्षेत्रहरूको विरूद्धमा जान्छौं र हरेक परिदृश्यको परीक्षण गर्न हाम्रो उचित लगनशीलता गर्छौं।
यो हप्ता, रिच फोर्स उनीहरूले मसँग गरेको अन्तर्वार्ता जारी गरे ठूलो डाटा र मार्केटिंग र यो एक विषय हो जुनको म भावुक छु। बिग डाटाको साथ, मार्केटरहरू V वीको… भोल्यूम, विविधता, वेग र सत्यताको साथ वास्तविक-समय डाटा प्रस्तुत गर्न सकिन्छ। त्यहाँ संसाधनहरूको साथ परीक्षण र मापन गर्नका लागि बजारका लागि कुनै कारण छैन हरेक आज कल अन्तर्क्रिया।
बयान म चाहन्छ कि बजारले भन्न छाड्छ,
हामीले प्रयास गर्यौं र त्यसले काम गरेन।
म तिनीहरूको परिभाषा प्रश्न प्रयास गर्यो साथै तिनीहरूको प्रश्न काम गरेन। हामीसँग एउटा सम्भावना थियो, उदाहरणको रूपमा, त्यसले भन्यो कि उनीहरू एसईओ गर्दैनन् किनभने तिनीहरूका सबै सम्भावनाहरू फेसबुकबाट आएका हुन्। मैले उनीहरूले उनीहरूको सबै बजेट कहाँ राखेका थिए भनेर सोधे ... आश्चर्यजनक होइन कि यो सबै फेसबुकमा थियो। ठिक छ, यसको मतलब यो होइन कि जैविक खोजीले काम गरेन, यसको मतलब यो छ कि स्रोतहरू यसलाई प्रयोगको लागि वास्तविक रूपमा प्रयोग गरिएको थिएन र हेर्नुहोस् यदि त्यहाँ सकारात्मक आरओआई छ। त्यो ठूलो भिन्नता हो।
त्यस कथनसँगसँगै अरूहरू पनि छन्:
हामी हाम्रो व्यवसाय को सबै रेफरल र मुखको शब्द मार्फत प्राप्त गर्छौं।
सामाजिक मिडिया काम गर्दैन।
हामीसँग सामग्री विकास गर्न समय छैन।
यसमा थोरै अनुसन्धानले सामान्यतया साइट खोजीमा फेला पार्दैन, कुनै सामग्री रणनीतिहरू, हराइरहेको सम्पर्क जानकारी वा वेबसाइटमा काम नगरेको फारम, कुनै ईमेल मार्केटि program कार्यक्रम…। तपाईको सबै व्यवसाय रेफरलहरू र मुखको वचनको माध्यमबाट आउँदैनन्! तपाईसँग अनलाइन व्यावसाय गर्ने अर्को कुनै तरीका छैन!
केही वर्ष पहिले, म गुनासो छ कि समस्या संग विश्लेषण यो केवल यो बुद्धिमान हो कि प्रयोगकर्ता अनुभव छ र यसलाई चलाएर परिष्कृत छ। गहिरो उत्खनन बिना रिपोर्ट चलाउनुहोस्, र तपाईं प्रयोग गरेर केहि भयानक निर्णय लिन सक्नुहुन्छ विश्लेषण। ठोस निर्णय लिनको लागि ठोस कार्यान्वयनको आवश्यक पर्दछ विश्लेषण र डिकोडिंगको लागि अनुभव चाहिन्छ। विश्लेषक यसको लागि एक उत्तम उपकरण हो सोध्नु प्रश्न, तर को लागी एक भयानक उपकरण उत्तर खोज्दै.
बिग डाटा, डाटा व्यवस्थापन प्लेटफर्म, ड्यासबोर्ड, र अन्य उपकरणहरू वास्तवमै अगाडि आउँदैछन्। रिच फोर्स संगठनहरूको डेटा क्वालिटी समस्याहरूलाई उनीहरूको डाटा सफा गरेर सुधार गर्दछ - डि-डुप्ingि standard्, मानकीकरण, सामान्यीकरण, सुधार र प्रमाणीकरण - एक स्वचालित र निरन्तर आधारमा। सबै भन्दा राम्रो मार्केटिंग अभियान प्रभावकारी मापन र कार्यान्वयन सुरु गर्न आवश्यक सबै अब उपलब्ध छ।
मैले भर्खरै भेटेको एउटा आकर्षक कम्पनी थियो पेरेभ्यू - जसले उनीहरूको मार्केटिंग प्रयास जस्ता चीजहरूको बिरूद्ध सम्पूर्ण निगमको वित्तीयलाई बेन्चमार्किंग गर्दैछ ताकि तिनीहरूले आफ्नो प्रतिस्पर्धा र उद्योगको तुलनामा उनीहरू कसरी अनुक्रमणिका देख्न सकून्। तपाईंको बोर्ड देखाउन सक्षम भएको कल्पना गर्नुहोस् कि तपाईंको मार्केटिंग खर्च औसतमा छ वा तपाईंको नेतृत्व प्रति लागत र बृद्धि उद्योगको अधिक हो! यी समाधानहरू अब हामीलाई उपलब्ध छन्।
के उपलब्ध छैन, यद्यपि, प्रविधि र टेक्नोलोजीको प्रयोग गर्न संसाधनहरू।
प्रतिभा उपकरण भन्दा खोज्न गाह्रो छ। विपणन विश्लेषकहरू छन् कि राम्रोसँग परीक्षण गर्न, मापन गर्न र मान्यताको लागि सक्षम छन् पहिले भन्दा कठिन हुँदै गइरहेको छ। रिच फोर्स अन्तर्वार्ता
हामी परामर्श कम्पनीहरु जस्तो काम गर्दैछौं पर्सिओ, जसले भविष्यवाणी गर्ने विश्लेषणका लागि आश्चर्यजनक रूपमा अचूक मोडलहरू विकास गर्दैछन् जुन मार्केटर्सहरूले उनीहरूको क्रस-च्यानल खर्चहरू बुझ्नको लागि अझ सक्षम हुनेछ कि कसरी उनीहरूको मार्केटिंग लगानीमा परिवर्तनहरूले आश्चर्यजनक शुद्धताका साथ परिणामलाई असर पार्नेछ।
हामीले अन्तर्वार्ता लिएका छौं र काम गर्ने कम्पनीहरूको खतरनाक संख्या मापन गर्दैन र यसको सट्टामा अझै हिपबाट बजार लिन्छ। यी आमा र पप्सहरू होइनन् ... तिनीहरूमध्ये केही फर्च्युन companies०० कम्पनीहरू हुन्। तिनीहरू प्रमाणित मापन पद्धतिहरू र प्रणालीलाई बेच्ने प्रणालीहरू बेवास्ता गर्छन् जसले उनीहरूको मार्केटिंग निर्णयहरू सुधार गर्दछ किनकि ती समान प्रणालीहरूले स्पष्ट जवाफदेही मेट्रिक्स प्रदान गर्दछ। तिनीहरू कार्यकारीहरू हुन् जुन केही देख्छ वा ध्वनिमा नीटपिक गर्दछ, रणनीतिको कार्यान्वयनमा ढिलाइ गर्दै र प्रभाव मापन किनभने उनीहरूसँग यो कसरी गर्ने भनेर कुनै सुराग छैन।
बजारका रूपमा, हामी अझ राम्रो गर्न सक्दछौं। हामीले अझ राम्रो गर्नै पर्छ। उपकरणहरू त्यहाँ छन्!
टैग: ठुलो डेटाक्रस-च्यानल मार्केटिंगडाटा सफाईडाटा व्यवस्थापन प्लेटफार्महरूdmpअन्तर्क्रियात्मक बुद्धिमत्ताबजारबजार बहानापेभरव्यूपर्सिओपुग्नभन्दै
मई 7, 2015 मा 10: 11 एएम
AMEN! दुःखको कुरा म यो सबै समय सुन्न। "हामीले १० बर्ष पहिले प्रयास गर्यौं र त्यसले काम गरेन।" म यो प्रायः ती मानिसहरुबाट सुनिरहेछु जसले १ company+ वर्षको लागि यस कम्पनीमा काम गरेका छन्। हामी कसरी मानिसहरूलाई अगाडि हेर्न र पछाडि हेरेन? वा विश्वास छ कि नयाँ विचारहरूले पुरानो विचारलाई राम्रोमा बदल्न सक्छ?
मई 11, 2015 मा 3: 21 PM
“अचम्म मान्नु पर्दैन कि तपाईंको सबै व्यवसाय रेफरलहरू र मुखको वचनको माध्यमबाट आउँदछ! तपाईसँग अनलाइन व्यावसाय गर्ने अरू कुनै तरीका छैन! "
यो! यो! यो एक मिलियन पटक!
मैले सुनेको छु कि अनगिन्ती अधिकारीहरूले मलाई कसरी यो "हाम्रो उद्योगमा कसरी काम गर्दछ भन्ने कुराका बारे लाइनहरूमा" स्वीकार्दछन्। हाम्रो व्यापारको%%% कोल्ड कलिंगबाट आउँछ। "
हो ... जब तपाईं आफ्नो लिड जेन बजेटको center%% को एक कल सेन्टरमा बाँड गर्नुहुन्छ, त्यो हुन जान्छ।
डग - के तपाईंले ईन्टरनेट कसरी व्यवसाय बढाउने मा एक आधारभूत कोर्स गर्न विचार गर्नुभयो? कार्यकारीहरूको संख्याका साथ जो आधारभूत कुरा बुझ्दैनन्, मलाई लाग्छ कि तपाईं हत्या गर्नुहोस्! 🙂
जनवरी १, २०१ 31 १२::2018 अपराह्न
यो लेख अन्तर्क्रियात्मक खुफिया लिंक गर्दछ, जुन डिसेम्बर २०१ in मा जेनेसिहरूले खरिद गरेको थियो। यस अधिग्रहणको बारेमा अधिक जानकारीको लागि, कृपया भ्रमण गर्नुहोस्: https://www.genesys.com/inin